Kallattiileen kaa'aman si'aayinaan hojiitti akka hiikamamaniif
Guddina si'aayaa waggoota 26n darbanitti biyya keenyatti galmaa'een gama dinagdee, hawaasummaafi siyaasaatiin jireenya hawaasichaa qofa otoo hintaane maqaa ummata addunyaa biratti ittiin beekamaa turre foyyesseera.
Naannawawwan biyya keenyaa hundatti keessumaa guddina abbaa dijiitii lamaa haaromsa waggoota 15 as adeemsifameen galmaa'een jireenyi ummataa sadarkaa qabatamaadhaan fooyya'eera.
Omishaafi omishtummaa baadiyyaatti galmaa'een qonnaan bultoota dureeyyii miliyoonotaan lakkaa'aman horachuun danda'ameera. Magaalotatti jijjiiramni misooma manneenii, intarpiraayizoota maakroofi xixiqqaa fa'iin galmaa'e jireenya harka qal'eeyyii hedduu utubeera. Milkaa'inni gama barnootaafi fayyaatiin galmaa'es jireenya lammiilee fooyyessuu keessatti qoodasaa bahataa jira.
Milkaa'inoonni irranatti tarreessine galmaa'uu kan danda'an imaammanni sirriin waan bocameefi nageenyi qabsoo cimaadhaan argame duguugamee misoomarra waan ooleefi.
Kun utuu kanaan jiruu walitti bu'iinsonni naannawawwan adda addaatti mul'ataa turan toora misoomaafi nageenyaa biyyattiin qabattee arreedaa jirtu kan quucarsuudha. Haalitti hoggansi walitti bu'iinsotaafi addummaa mul'ataa turan qabaa tures raafamaati kan ture.
Aadaan qajeelfamaan waldubbisuu yeroodhaa gara yerootti laafaa dhufuun ejjennoo tokko qabachuu dadhabuu bira darbamee kan inni tokko ijaare inni biraan diiguun hubatamaa tureera. Gochoonni akkasii biyyattiin karaa qxxaamuraarra akka dhaabatu taasisaa turaniiru. Hoggansi siyaasaa marti kan dhaabataniif garuu sagantaadhuma tokko raawwachiisuufi.
Rakkoolee ija babaasanii mul'atan kanneen gadifageenyaan kan qorate koreen raawwachiistuu hojii ADWUI tibbana walga'ii taa'een dhimmoota kanneen gadifageenyaan qoratee kallattii kaa'eera. Hanqinoota mul'ataa turaniifis hoggansi gararraa ittigaafatamummaa akka fudhatu ibsameera.
Korichi sadarkaa haaromsi gadifagoon irra jiru, rakkoolee buleeyyiifi wayitii biyyattiitti mul'ataa jiran tokko tokkoon ilaalee addaan baasuun ka'umsaafi furmaatasaarratti tokkummaa yaadaafi walamantaa uumeera. Rakkoolee dhabamsiisuuf kutattummaafi cimina jirurratti waliigaluusaa mirkaneesseera; kallattiis kaa'eera.
Kanaanis yeroo daran gabaabaa ta'e keessatti nageenya mirkaneessuufi ummanni gara jireenya tasgabbaa'aatti akka deebi'uuf ciminaan akka hojjetu mirkaneesseera.
Sochiilee nageenyaafi sochii ummataa jeeqan kamuu ummatuma wajjin ta'ee to'annoo jala oolchuuf mootummaan ittigaafatamummaa guutuu fudhatee akka raawwachiisus murteesseera.
Dhimmi olaantummaa seeraa mirkaneessuus hanga libsuu ijaatiifillee gaafii keessa galuu akka hinqabneefi sarbama seeraa gama kanaan mul'atan to'achuudhaan seeraafi nageenya haala amansiisaa ta'een mirkanaa'uu akka qabu kallattii kaa'eera.
Duutiifi qe'ee ofiirraa buqqa'uun sababoota daangaatiinis ta'e kanneen birootiin mudatan guutummaatti dhaabsisuuf murteesseera. Akkasumas lammiilee sababa walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaatiin qe'ee isaaniirraa buqqa'an haala jireenyaa tasgabbaa'aatti akka deebi'aniif haalli akka mijaa'u ibsameera.
Hojiilee riifoormii caasaan mootummaa gaafiilee ummataatiif deebii hatattamaa kennuu akka danda'an gochuuf eegalaman bu'aa qabeeyyii taasisuufi waantonni sirraa'uu qaban sirraa'anii hojii keessa akka galan murteesseera.
Walumaagalatti dhimmoonni xiyyeeffannoo cimaa barbaadaniifi korichaan addaan bahan saddeettanuu dafaniii akka hojiitti hiikamaniif nageenyaafi misooma mirkaneessuu waan ta'eef ciminaafi kutattummaa irratti ni hojjetama. Ummannis kallattiim korichi kaa'e harcaatii tokko malee si'aayinaan akka hojiirra ooluuf deegarsa barbaachisu gochuu qaba.
Torban kana/This_Week 43553
Guyyaa mara/All_Days 1468333